एसईओ कम्पनीको लागि उत्तम इ-वाणिज्य क्षेत्र के हो?
जब यो ई-वाणिज्य खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनमा आउँछ, त्यहाँ धेरै पारंपरिक अनुकूलन रणनीतिहरूसँग कुनै पनि मूल्य छैन. धेरै उत्पादन पृष्ठहरूको लागि व्यक्तिगत रूपमा अनुकूलित शीर्षकहरू / मेटा वर्णनहरू सिर्जना गर्न यो अर्थ छैन. साथै, एकाधिक उत्पादनहरूको लागि शब्दशैली सुझाव प्रदान गर्न पनि मूर्ख देखिन्छ. धेरै ई-वाणिज्य साइटहरूको कारणले, परम्परागत अप्टिमाइजेसन रणनीतिहरू पनि धेरै समय-उपभोग गर्ने वा टायरमा हुन सक्छ. पारंपरिक खोज इन्जिन अनुकूलन रणनीतिहरु को बावजूद, ई - वाणिज्य वेबसाइटहरु लाई सामान्यतया एसईओ बाधाहरु लाई एक सेट को रूप मा प्रस्तुत गर्दछ जसलाई आप को आवश्यकता - windows vps.
ई-वाणिज्य साइट एसईओका लागि यो सबै वेबसाइट पृष्ठहरू क्रल गरिएको र खोज बटहरू द्वारा अनुक्रमित बनाउन महत्त्वपूर्ण छ।. अन्यथा, तपाई ट्राफिक र बिक्री गुमाउन जोखिममा हुनुहुन्छ. ई-वाणिज्य खोज इन्जिन अनुकूलनका लागि पाँच क्षेत्रहरू छन् जुन तपाईंको साइट अनलाइन उपस्थितिलाई सुधार गर्न र आफ्नो राजस्व बढाउन सक्छ. यी क्षेत्रहरू साइट अनुक्रमणिका, मेनु नेभिगेसन, पृष्ठ-पेज प्रतिलिपि कोटिको पेज, उत्पाद स्कीमा, युआरएल संरचनाको लागि समावेश गर्दछ. यस लेखमा, हामी यी मूल्यवान क्षेत्रहरूमा नजिकको अवलोकन लिनेछौं कि सर्वश्रेष्ठ ई-वाणिज्य एसईओ कम्पनीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सल्लाह.
ई-वाणिज्य एसईओ क्षेत्र
साइट अनुक्रमणिका कुनै पनि ठूलो ई - वाणिज्य साइट. तपाईंको साइट अनुकूलन प्रयासहरू बेकार छन् भने खोजी बटहरूले तपाइँको वेबसाइट सामग्री फेला पार्न सक्दैनन्. त्यहाँ तपाईको साइट अनुक्रमणिका सुधार गर्न कसरी थुप्रै तरिका छन्. सबैभन्दा पहिले, तपाइँले Google सर्भर कन्सोलमा तपाईंको ई-वाणिज्य साइट फिर्ती सर्भर त्रुटिहरूको संख्या समीक्षा गर्न आवश्यक छ. तपाईंले सर्भरमा सर्भर रिपोर्ट रिपोर्ट कन्सोलमा तपाईंको सर्भर त्रुटिहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ. यी त्रुटिहरू सामान्यतया एक गरीब ई-कमर्स साइट स्वास्थ्य संकेत गर्दछ. यसबाहेक, तपाईंलाई आफ्नो साइटमैप समीक्षा गर्न आवश्यक छ किनकि नियमित रूपमा देखा पर्दछ कि धेरै बन्द गरिएका वस्तुहरू साइटमैपमा राखिएका छन् र तिनीहरूका पृष्ठहरू पहिले नै हटाइयो।. यसको मतलब यो गुगल बटहरू उत्पाद पृष्ठहरू पार्सिलोना जारी राख्छ जुन अब अवस्थित छैन. यही कारणले तपाइँलाई तपाईको साइटमैपलाई लगातार नयाँ स्टाफको आगमन प्रतिबिम्बित गर्न र अपडेट गर्न आवश्यक छ जुन Google लाई सिग्नललाई पुरानो पार्सिङ रोक्न अनुमति दिन्छ।.
ई-कमर्स वेबसाइट एसईओ र अन्तरलिङ्कको लागि एक गुणवत्ता वेबसाइट मेनु नेभिगेशन आवश्यक छ।. तपाईका साइट मेनुमा पहिचान गर्नुभएका उत्पादन पृष्ठहरू सामान्यतया खोजी परिणामहरुमा अनुक्रमणिका हुन्छन्. ई-वाणिज्य साइटहरूको लागि मेनु नेभिगेशन सैकड़ों हजार उत्पादन पेजहरू स्ट्रिम गर्न प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ. सर्वश्रेष्ठ ई-वाणिज्य एसईओ कम्पनीहरुले आफ्नो क्लाइन्ट साइटहरूमा कार्यान्वयन गर्ने सिफारिस विकल्प माध्यमिक नेभिगेसन विकल्पहरूको प्रयोग हो. तपाईंको प्राथमिक साइट मेनुमा केवल प्रत्येक सामान्य उत्पाद कोटिहरू सामेल हुनुपर्छ जुन यी प्रकारको प्रत्येक समूह माध्यम भित्र माध्यमिक विकल्पहरूमा विस्तार गर्न को लागी.
श्रेणी पृष्ठहरूको लागि अन-पृष्ठ प्रतिलिपि
एक उत्पाद कोटी पृष्ठमा वस्तुहरूको साधारण सूचीले के कुनै संकेत प्रदान गर्दैन पृष्ठमा Google को लागि श्रेणी हुनुपर्छ. यसको सट्टा, तपाईंले पृष्ठमा पाठ्यपुस्तक HTML सामग्री कार्यान्वयन गर्नुपर्छ. तपाईले प्रत्येक वेबसाइट उत्पाद श्रेणीको लागि छोटो वर्णन गर्नु पर्छ कि खोज बटहरू तपाईंको ई-वाणिज्य साइट सामग्री क्रल गर्ने मौका र खोज परिणाममा यसलाई स्थान दिईनेछ।.
सबैभन्दा उपयुक्त योजना. org ई-वाणिज्य साइटको लागि संरचित डाटा उत्पादन स्कीमा हो. ई-वाणिज्य साइटहरूको लागि उत्पादन स्कीमा प्रयोग गरी फायदामा खोज इन्जिन जोरहरू. यही कारणले तपाईलाई एक छवि स्कीमा छवि सन्दर्भको साथ निश्चित गर्न आवश्यक छ.
तपाईंको यूआरएल ढाँचा सुधार गर्न, तपाईलाई आफ्नो उत्पादनको नजिक राख्न आवश्यक छ। मूल फोल्डर. तपाइँले उत्पादन फोल्डर पछि लामो प्यारामिटर तार समावेश गर्न सक्नुहुनेछ. यद्यपि, तपाईलाई निश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईको ब्रान्ड नाम URL मा खोजी नतिजाहरु देखिने देखिने छ.